Hlola iBeijing, China - World Tourism Portal
Hlola iBeijing, China
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eBeijing, China.
Izindawo ongazihambela eduze kwaseBeijing
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eBeijing, China
Bukela ividiyo ekhuluma ngeBeijing, eChina
Hlola iBeijing; inhloko-dolobha ye I-People's Republic of China, izwe elinabantu abaningi emhlabeni. Njengoba kunesibalo sabantu be-21,500,000, yidolobha lesibili ngobukhulu emva kwalokho Shanghai. Bekubuye kube yisihlalo samakhosi ombuso we-Ming ne-Qing kuze kube yilapho kusungulwa iRiphabhliki yaseChina e1911 IBeijing yisikhungo sezepolitiki, semfundo nezamasiko ezwe lonke futhi yingakho sicebile kumasayithi omlando nezinhlaka ezibalulekile zikahulumeni nezamasiko.
Idolobha liphawuleka ngokushelela kwalo kanye nesimo sezulu esomile. Kunamagquma amathathu kuphela angatholakala emikhawulweni yedolobha (eJingshan Park enyakatho yeDolobha elivinjelwe) futhi izintaba zizungeze inhlokodolobha ezinhlangothini ezintathu. Njengokulungiswa kwedolobha elinqatshelwe, iBeijing inemigwaqo eyindilinga eyindilinga, empeleni okuyizinxantathu, ezungeza idolobha elikhulu futhi isebenze njengezindawo ezinhle zokubonisa njengomuzi owodwa wokuhamba mayelana nedolobha. Ngaphandle kwemigwaqo eyindilinga kuyizingxenye ezivakashelwe kakhulu I-Great Wall yaseChina, efakaza izivakashi emhlabeni wonke futhi iBeijing isebenza njengendlunkulu enhle kulabo abafisa ukubuka esinye sezakhiwo zesintu ezikhumbulekayo nezimi njalo.
IBeijing ngokwezwi nezwi isho iNorth Capital, indima eyidlalile kaningi emlandweni omude waseChina. Umlando kaBeijing waqala emuva eminyakeni eyizinkulungwane ezimbalwa kepha waqala ukuphawuleka emlandweni waseChina ngemuva kokuthi kwenziwe inhloko-dolobha yoMbuso waseYan ngaphansi kwegama elithi Yanjing. U-Yan wayengomunye wemibuso emikhulu ye-Warring States Period, eminye iminyaka ye-2,000 edlule. Ngemuva kokuwa kweYan, ngesikhathi sokubusa kukaHan neTang, indawo yaseBeijing yayiyisifunda esikhulu enyakatho neChina.
IBeijing inesimo sezulu sezwekazi esinethonya elinamandla amakhulu ngamahlobo ashisayo, anomswakama nobusika obubandayo nobomile. Isikhathi esingcono kakhulu sokuvakasha ukuvakasha ngoSepthemba nango-Okthoba, phakathi kwe- “Golden Autumn”. Intwasahlobo yisizini yeziphepho zothuli futhi ngenye indlela kufudumele futhi yomile. Ihlobo lingashisa ngokucindezela futhi izixuku zezivakashi zivame ukuba ezikhulu kakhulu; imimoya ekhona ngokuvela kokungcola kwesicupho esiseningizimu (izintaba zilele enyakatho nasentshonalanga), okwenza ihlobo libe yisikhathi esingesihle sekhwalithi yomoya. I-smog is kubi kakhulu, nokho, ebusika, ebandayo futhi yomile nge-infrequent, kodwa enhle, iqhwa. Izinga lokushisa lingawa kalula ngaphansi kwe-−10 ° C ebusika, futhi njengoba nje likhuphuka kalula ngaphezu kwe-35 ° C ehlobo.
Ubuningi bendawo kanye nokuma komhlaba
IBeijing inesibalo sabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-20, ngamaphesenti amakhulu abangabafuduki, abahlala e16,800 km² basatshalaliswa ezifundeni ze18. Idolobhana ligudla umngcele wesiFundazwe i-Hebei (lapho ukungcoliswa okuningi okuqala khona iBeijing kusuka lapho) kuya enyakatho, entshonalanga naseningizimu, kanye neTianjin empumalanga.
IBeijing iyashintsha ngesivinini esikhulu futhi ingenye yamadolobha amakhulu kakhulu emhlabeni. Amamephu wakwamanye amazwe ngeke atholakale, ngakho-ke uzodinga imihlahlandlela yolimi lwesiSinomaps ezitolo zezincwadi ezisemthethweni noma kumahhala we-5-star hotel desks. Gwema ama-Sinomaps enkohliso ephepheni elijwayelekile, okuyiminyaka isiphelelwe isikhathi nemininingwane engenayo.
Ngaphambi kokuba uthathe uhambo lokuzungeza idolobha, yiba namagama wezindawo ofuna ukuzivakashela ezibhalwe ngezinhlamvu zesiShayina. Abasebenzi ehhotela lakho kufanele bakusize futhi uthathe ikhadi labo ukukusiza ukubuya. Thola imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka bese uthatha umhlahlandlela osesikhathini seSinomap nawe.
Lapho uwela umgwaqo ungene China, ucabange ukuthi akekho wabasebenzisi bomgwaqo ozokuvumela, noma ngabe kukhona iphoyisa. Sebenzisa ukuwela i-zebra kepha abashayeli abaningi ngeke bame. Ngaso sonke isikhathi bhekisisa njengemoto noma ibhayisekili elingase lingemva kwakho noma likuqonde ngqo. Uma kufanele uthole izimoto eziningana namabhayisekili aqonde kuwe ngezindlela ezihlukile, ungazami ukujaha ukuphepha; esikhundleni salokho, yimani. Kukhona amandla ngamanani, ngakho-ke lapho inqwaba yabantu iwela ndawonye izimoto kungenzeka ime noma yehlise ijubane.
Izindawo, Izindawo zobukhosi, amathempeli, amapaki, Iminyuziyamu, imidwebo eBeijing
Ulimi lwaseBeijing isiMandarin Chinese. I-standard Mandarin ngokwayo ibingolimi olusebenzayo lwe-Ming ne-Qing dynasties futhi yayizinze ikakhulu olimini lwesiBeijing.
IsiNgisi sikhulunywa ngabasebenzi ezindaweni eziheha izivakashi, nasemahhotela amakhulu. Ngaphandle kwalokho, izikhulumi zesiNgisi azijwayelekile, ngakho-ke thola ikhadi lebhizinisi lehhotela lakho ukukhombisa umshayeli wetekisi uma kwenzeka ulahleka. Ngokunjalo, cela abasebenzi ehhotela lakho ukuthi babhale phansi amagama okuheha izivakashi ohlela ukuwavakashela ngesiShayina, ukuze abantu bendawo bakukhombe indlela efanele.
Imikhosi, ukuhamba, ukugibela, ithiyetha, amahholo ekhonsathi eBeijing
Cishe kuyo yonke imakethi eBeijing, ukudonsa kanzima kubalulekile. Ikakhulu lapho udlulisa amehlo ezindaweni ezinkulu, “zabavakashi” zezinto ezejwayelekile, ungakubeki ngaphansi kwesithunzi sakho ukuqala ukuvumelana nge-15% yentengo yokuqala yokubuza yomthengisi. Eqinisweni, ezimakethe “zabavakashi” eziningi izintengo zokugcina ngokuvamile zingaphansi njenge-15% -20% yentengo yokuqala ebuzayo futhi "ukususa zero" akuyona indawo yokungena embi enqubweni yokuxoxisana. Ngemuva kokuchitha isikhathi esithile ehlikihla, ungangabazi ukusongela ngokuhamba, ngoba lokhu kuyindlela esheshayo yokubona umthengisi eyehlisa amanani entengo yakhe aze afike ezingeni elifanele. Ukuthenga ngobuningi noma ngamaqembu kunganciphisa nentengo. Umthengisi uphakeme kangakanani noma uphansi kangakanani intengo ebuzayo incike kwikhasimende, umthengisi, ukuthandwa komkhiqizo, ngisho nesikhathi sosuku. Abathengisi baphinde bathambekele ekubhekeni okuncane okubonakalayo, njengamaCaucasus noma abantu bendabuko yase-Afrika.
Kunemakethe eminingana ethokozisayo ngaseBeijing lapho ungathola khona lonke uhlobo lwezinto ezingabizi (futhi ezivamile). Ezinye zezindawo ezithandwa kakhulu yiXizhimen eSifundeni saseXicheng, eSilk Street noma ePanjiayuan eSifundeni saseChaoyang naseMakethe yaseHong Qiao esifundeni saseChongwen.
Njengenye indlela yezimakethe ungaya kwezinye zezindawo ezitolo ezifakwe nezitolo. Lokhu kufaka neNanluoguoxiang esiFundeni saseDongcheng naku-Qianmen Dajie Pedestrian Street, eDashilan kanye naseLiulichang esifundeni saseXuanwu.
Uma ufuna izitolo zendabuko zokudla zamaShayina zama iYinhehua Vegetarian esifundeni saseDongcheng, iDaoxiangcun, iLiubiju noma iTea Street esifundeni saseXuanwu.
Ukuvakashela izitolo zamahhotela nezitolo zomnyango akuyona into ebonakala kakhulu ukuyothenga eChina, kodwa kufanelekile ukubukeka. Yize ngokuvamile kubiza kakhulu, mancane amathuba okuthengisa izimpahla ezisezingeni eliphansi ngempela. Isitayela sakudala sokuthengiswa kabusha kwamaShayina kancane kancane siguqulwa izitolo ezinomqondo wokuqamba okungcono futhi izinto zesikhumbuzo ziba ngcono unyaka ngamunye. Izingubo zesilika, izilungiselelo zetafula nokunye kanye nezinye izindawo eziseduzane nedolobha, zikufanele ukubukwa, njengoba kunjalo ngumbumbi wobumba, itiye elikhethekile nezinye izinto zendabuko. Ezinye zezindawo ezithandwa kakhulu ngalolu hlobo lokuthenga yi-Wangfujing kanye ne-Malls e-Oriental Plaza zombili esifundeni i-Dongcheng kanye neXidan esifundeni iXicheng.
Ibhizinisi lekaphethi liqine eBeijing futhi uzothola zonke izinhlobo zezitolo ezithengisa amakhaphethi kasilika nezinye izinhlobo.
IBeijing inikeza ithuba elifanelekile lokuthola isampula lokudla kulo lonke izwe. Ezinye izindawo zokudlela ezinhle kakhulu eBeijing zidla ukudla okuvela eSichuan, eHunan, eGuangzhou, eTibet, eYunnan, Xinjiang nase- Yini enye okufanele uyidle eBeijing.
I-Intanethi ivinjelwe kakhulu eChina. I-Google, i-Facebook, i-Twitter, i-YouTube, i-YouTube kanye namawebhusayithi wezindaba amaningi aseNtshonalanga avinjelwe ngokuphelele, futhi akujwayelekile ukuthi amawebhusayithi amaningi aphesheya angalayishi. Izibonelo zezindawo ezivinjelwe ngokwengxenye zifaka iWikipedia, iBloggs, neTumblr. Ukuze unqande le nkinga ungathenga i-VPN yokuhweba ukuze uvule umhubhe okhipha umlilo. Yazi ukuthi izinhlobo zamahhala zinezimbobo zokuphepha futhi zingakhuphula amathuba akho okuthi ungabanjwa.
I-Wi-Fi yamahhala ingatholakala kuzo zonke izinhlobo zamakhekhe amaketanga nezizimele nezindawo zokudlela ezisheshayo zokudla, kanye nezindawo zokudlela eziningi ezingahlali phansi. Lawa makhofi angabukeka njengezindawo zokudlela ezivela ngaphandle, kodwa noma iyiphi indawo ebizwa nge-cafe izoba ne-Wi-Fi. I-Wi-Fi nayo ijwayelekile emahostela nasemahhotela. Ukuxhuma okusheshayo kungenzeka kutholakale imali encane.
Abavakashi bamabhanoyi abade bazothola umgwaqo wezwe i-109 yindlela emnandi yokungena noma yokushiya iBeijing, yize umsebenzi omningi. Ingena ngokushesha emagqumeni emaweni emaphethelweni edolobha, kepha ibona ukugcwala okuncane, igcinwe kahle futhi iyadlula yize imvelo enhle yamapulazi namahlathi. Kuyamangalisa ukuthi usondelene kangakanani neBeijing, nokuthi uzwa kude kangakanani.
I-Tianjin - Cishe imizuzu engu-30 ezungeze imizuzu eyi-10 ngesitimela esiyinhlamvu, iTianjin ungomunye womasipala abane ngaphakathi kweChina futhi uqhathanisa nedolobha elikhulu ngenxa yethonya labo laseYurophu. ITianjin inendawo enhle yase-Little Italy ngaphandle kwezinye izindawo zomlando ezihehayo.
Uma uhlose ukuthatha I-Trans-Siberian-Railway kuya Mongolia ungathatha ibhasi elilala ubusuku bonke ukusuka eg. Muxiyuan Long Distance Bus Station to Inner Mongolia Erlian. Qaphela ukuthi amathikithi ebhasi angathengwa kuphela ngosuku lokuhamba.
Inqubo lapho uthatha ibhasi muhle kakhulu njengoba uthatha i-jeep, kuphela njengoba abantu abaningi kufanele behle ebhasini, badlule kwamanye amazwe, babuye ebhasini futhi, kuthatha isikhashana. Lokho kusho, kufanele ukwazi ukusuka ku-Erlian uye ku-Zamyn-Uud cishe amahora amabili.
Amahora amane ngesitimela noma ngebhasi noma amahora amabili ngemoto, vakashela ukubuyela emuva kwangaphambi kokubusa kweChengde (256 km / 159 mi enyakatho-mpumalanga yeBeijing).
Russia - Kunezitimela ezimbili zeminyaka yonke ezungeze unyaka wonke zaseTrans-Siberian ukusuka eBeijing kuya eMoscow. Eyodwa yi-K3 efinyelela Moscow nge Ulaanbaatar, kusuka ngoLwesithathu maviki onke. Enye yi-K19 esuka eBeijing ngoMgqibelo masonto onke, ifinyelela eMoscow ngeManchuria. Ngokufana K23, la amathikithi angawathenga kuphela kumenzeli wokuhamba. Ungawathenga amathikithi eTrans-Siberian kusuka eBeijing kuya eMoscow ngaphambi kwesikhathi.
Ukuze uhlole iBeijing uzodinga uhambo olulodwa oluhle ngoba awunakuba nakho okwanele